Canada: Dhakhaatiir diiday in mushaar kordhin loo sameeyo - BBC News Somali
Canada: Dhakhaatiir diiday in mushaar kordhin loo sameeyo
9 Maarso 2018
Lahaanshaha sawirka STOCKVISUAL
Dhakhaatiirta gobolka Quebec ee dalka Canada ayaa ayaa ka yaabiyay caalamka ka dib markii ay diideen mushaar kordhin loo sameeyay.
Maxay tahay sababta uu qof u diidayo in mushaarka loo kordhiyo?
Dhakhaatiirta gobolka Quebec, jawaabta ay bixiyeen waxa ay ahayd mid fudud 'Daryeelka bukaanka.
Heshiis wadahadal ah oo soo socday muddo 8 ah oo la saxiixay bishii February ayaa dhaqaatiir ay tiradooda dhan tahay 20,000 oo ku sugan gobolkaasi waxa ay sanadkii heli lahaayeen mushaar kordhin dhan 1.4% ilaa 1.8%.
Waa heshiis xaq ah, sida ay sheegeen ururkii matalayay Dhakhaatiirta Quebec oo iyagu heshiiskan ka mira dhaliyay .
Balse dhamaan dhakhaatiirta uma aysan dhanayn heshiiska 700 oo dhaqtar ayaa saxiixay qoraal ay ku sheegeen in aysan doonayn wax mushaar kordhin ah .
Waxa ay Dhakhaatiirtan sheegeen in lacagaha iyaga mushaar kordhinta loogu samaynayo lagu bixiyo daryeelka bukaanada iyo adeegooda.
Kooxdani ayaa matalaysa dhakhaatiirta gobolka ee u ololeeya oo sida wayn u taageera in adeega caafimaadka ee dadwaynaha sare loo qaado.
"Haddii aan nahay dhakhaatiirta Quebec, waxa aan codsanaynaa in meesha laga saaro mushaar kordhinta loo sameeyay dhaqaatiirta islamarkana lacagahaasi loo leexiyo wanaajinta adeega caafimaadka ee ay u qalmaan dadka Quebec," waxaa sidaasi lagu sheegay warqada oo la soo saaray 26 bishii Ferbruary.
Dhakhaatiir doonaya in ay si bilaash ah u daweeyaan dad magangalyo doon ah
Dhakhaatiir ku guuleystay qalliinka 'buradii ugu weyneyd ee maskaxda'
Dhakhaatiir shaqada looga eryay in ay ilmo nool oo dhashay si khalad ah ugu sheegeen mayd
Muddo todobaadyo gudahood ah ayaa waxa sare u sii kacday tirada dhakhaatiirta saxiixaysa warqadan taasi oo gaartay 700.
Quebec aya waxa ku sugan 20,000 oo dhakhtar oo ka howlgala isbataalada gobolkaasi.
Arbacadii warbixin ay soo saareen gudiga madaxa banaan ee daryeelka caafimaadka gobolka Quebec ayaa waxaa lagu sheegay in mushaarka dhakhaatiirta la laba laabay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2015, balse saacadaha ay shaqeeyaan dhakhaatiirta oo ay u adeegaan bukaanada ay hoos u dhacday.
Dhanka kale kalkaaliyayaasha caafimaadka gobolkaasi ayaa imika u dagaalamaya mushaar kordhin iyo in wax laga qabto xaaladaha ay ku shaqeeyaan.